Irish Whiskey Academy Midleton - Whisky Irish
Njengoba ingane encane abahlala eduze Midleton e-Ireland, Ubaba walithanda Scammell iloli! futhi manje, Ngimi eceleni vintage John Jameson liveried Scammell ku distillery ubudala e Midleton, Ngingawabona, ukuthi, lapho avela khona.
Ngo yasemakhaya Ireland ka 1950, Scammels zinto ziwuphawu kuzo zonke, okungcono kwaba ezweni elisathuthuka. Yibona amaloli giant, alethwe ubuchwepheshe besimanje ukuze Ireland futhi kwakufanekisela amandla intuthuko izinkampani ezifana Jameson, Irish futhi kwaba ekugcineni ahlabayo emisha kanye nezimboni ze-engaphezu kweyikhulu. Scammels innovative Ireland entsha abakubonisayo, uphefumulela izingane ezincane like ubaba, onjiniyela kanye nososayensi we 60, Ireland yesimanje ezilandelayo 50 umusi Iminyaka esikhundleni, Stahl, Umbhalo nethusi zakhelwe nge electronics ne-silicon.
ke ningalenzi iphutha ngoba, kwakukuhle imboni nogologo njengoba zonke kancane njengoba ezintsha futhi lesichubekako ke njengoba Silicon Valley namuhla. Imboni Whisky wagxuma isandla phambili esandleni ne Ubudala Intuthu. Intuthuko ukukhiqizwa kubhayela nogwali kuholele kahle kangcono zethusi iketela, okumile Ikholomu futhi distillery art. Intuthu izinjini kungaba gxuma, lapho ehlobo ezomile wahudulelwa amasondo okugaya amanzi kwaba obhekwe umusi amakhanda futhi umusi izikebhe, I Whisky kulethwa izilaleli ebanzi eYurophu nase Melika ngaleyondlela umthamo esibalulekile yokukhishwa UK nase-Ireland.
kuhlanganisa namuhla Whisky Creation, isayensi, art, ubuchwepheshe, umlando, ezolimo, izikebhe, Ukuqamba, Umnotho futhi ngaphezu kwakho konke a ukwazisa abanothando komkhiqizo nokuqhosha ukuxhumana okuqinile ukuba esidlule. Whisky Irish, ngokungafani Scotch nogologo namanje enziwa ngesandla ngendlela efanayo, njengoba phezu 200 edlule, ngobuchwepheshe akabonaze ​​abavumele, ukuze kulondolozwe nakumasiko, makalahle ukunambitheka kanye izinga.
Ngijoyine nedlanzana nabo nogologo izintatheli ezazivela eBrithani, Ireland naseNetherlands, bonke abamenyiwe, ungenye kwezinsuku ezimbalwa njengoba izivakashi Irish Distillers ezintsha Irish Whiskey Academy of Jameson Irish Whiskey Experience zabo ku Midelton yabo Distillery eduze imali Cork. Ihhotela lethu kuze kuphele isikhathi ukuvakasha iyona amahle Castlemartyr kuyona, nje amakhilomitha ambalwa ukusuka Distillery.
Irish Whiskey Academy Izintatheli
My Irish Whiskey Intatheli Class Umbhangqwana wase-Ireland UK futhi Netherlands. Ngingumfana uMfundisi Pet ngakwesokunxele ababambelela eduze komfundisi uDavide McCabe!
Ngemva kokuthi i-ophihliza iqhwa of robins 15 sisuke sihlanganyela abasebenzi Irish Whiskey Academy for kwasemini ngesikhathi Indawo yokudlela Malt House e Hampton Isikhungo sesivakashi. Lapha sihlangana khona noDavide McCabe, the umfundisi isibonelo sethu i-course futhi Kelly O'Mahony, Experience Customer Umphathi kungaba. Ngisho ngesikhathi sekhefu, kwakusobala, ukuthi nabantu, nje abanothando lokwenza umsebenzi wazo.
Kelly uchaza, kanjani ngisho kudivayisi ezinkulu ezifana Midleton, nge ukuxuba yayo okuphumayo zezimboni kanye nezokuvakasha amasevisi eziyinkimbinkimbi ngempela emzaneni. Umuzi emoyeni? mina alinge. Ekupheleni lolu hambo Ngingathanda ukubona, kanjani ilungelo sobabili ..
Siqala emva kwasemini okusheshayo orientation uhambo distillery ubudala ngenhloso elidala Tile imbobo Malting emabhilidini, waterwheel, Intuthu injini nalokho okukholelwa ukuthi, ukuthi kube ebhodweni elikhulu namanje emhlabeni. Kwakusahlala distilling umoya Midleton, kuze kube muva nje, ngemva kuka- 100 iminyaka yesevisi, kuphela unokusha, benana isifaniselo yesimanje eminyakeni embalwa edlule. ukukhiqizwa Whisky akuyona ngempela kuningi okushintshile ezingaphezu kuka 200 iminyaka ngakho, uma kungenziwanga waphula, musa ukukulungisa.
Ngemva obligatory ekilasini isithombe uphawu phambi Academy, isimo isakhiwo art esikoleni, i ultra-yanamuhla ubuchwepheshe izindlu etimviwabukelwa, ziphuzo zazihluzwa sakhe kwendingilizi isayensi lab futhi Yebo ezihlotshiswe kahle lounge yokunambitha okusikhumbuza ezinye okokufaka thina amakilabhu posher eDublin London. Futhi othisha? othisha bethu Dave McCabe kusobala ukuthi indoda, izimpilo, kuheleza uthanda nogologo yakhe! bathi, ukuthi othisha engcono ukugcizelela ubumnandi ukuphila nokufunda, nokulangazelela Dave kusobala esinye salezi othisha. Ngazi, ukuthi kakade ukuya ezinsukwini ezimbalwa ezizayo, kube mnandi kakhulu, futhi ulwazi!
Kelly wayeke Usitshele, sasizokufa yokukhiqizela nogologo kusukela wokusanhlamvu ingilazi, ngakho nge umlimi, ukuthi ummbila uyaphela umkhankaso. Awunayo empeleni akhulume Abalimi ku Academy, kodwa kunalokho phezu 140 imindeni ukulima, ehlakazekile emhlabeni Münster 60 ukuhlinzekela amathani ngelilanga ibhali Midleton.
Kusuka lapho wadabula izinga ibhali, uhlole ibhali lwemithombo futhi wasebenza indlela yethu kuze kube Milling, Mashing kanye yokuphisa 10% ABV kakolweni ubhiya ezifana "izwi", ngamaqoqo ka 116.000 Amalitha isikhathi ekugcineni distilled ku nogologo umoya ngeke.
Thina wathuthela isifundo eningiliziwe ziphuzo zazihluzwa futhi butholakala enqubweni eyinkimbinkimbi yokuthela ebhodweni kathathu namanje nesembozo ziphuzo zazihluzwa kuhlanganise yobuciko nesayensi ziphuzo zazihluzwa feints nokuncishiswa, ngaphambi kokuba wayeka ukuba Coffey noma ikholomu namanje ziphuzo zazihluzwa ne ukuxegiselwa umoya owodwa okusanhlamvu, yengezwe, uxhumekile noma lighter imnandi ukwakheka imbiza le whiskeys ezihlangene.
Thina sabe sesidlulela ngokusho Ukucwaninga ngokuguga, okuyinto ubuciko ukuguga nogologo e emiphongolweni lokhuni noma imiphongolo. Hhayi nje noma yimuphi run, kodwa ngokukhethekile amazwe olulodwa ukusetshenziswa Bourbon imiphongolo at ngamunye Kentucky 120 US dollar kanye ezikhethiwe sherry futhi Malaga iwayini imiphongolo kusukela eningizimu yeSpain zemali engaphezu 700 lo € 5.000 esetshenziswa ngonyaka.
Futhi igama elithi "umndeni" lisetshenziswa, based kuka cishe yonke esiyigugu-Spanish sherry emiphongolweni kusukela emndenini eduze izinkampani Jerez. Don Antonio Paez Lobato kahle phezu 80 futhi namanje ngenkuthalo ilawula cooperage umndeni. Ubuhlobo bakhe ne Midleton umndeni luqinile futhi sikhuthazela. ngakho, ukuthi Midleton Master Cooper thela Buckley ithumela ngokoqobo yayo Spain for internship kanye Don Antonio abazukulu laba bafikile ukubashaya Ireland for internship e Midleton.
Kwase kuyisikhathi sokuba ayeke umsebenzi isigaba ngakho sacelwa ukuba umbhede yokunambitha ngezansi, ukunambitheka Midleton 4 ezahlukene kakhulu imbiza namanje whiskey.
Oyisimanga Green Spot, I eside ozithandayo nogologo yami siqu Irish has.
Robin engu-12 of Christmas yayo sherry emangalisayo cask ako.
Amandla Johns Lane akuhlungangwa Churchill nge sekugcineni yakhe Spicy ezomile.
Legacy Barry Crockett Asikho isidingo, ngaphezulu, uthi njengoba athwala igama master!
Irish Whiskey Academy zokuhlolwa
Irish Whiskey Academy Ngokuqhathanisa umoya unmatured namanje nge whiskey.
Ukusuka lapho, kwase isikhathi, ukuze agcizelele ekufundeni kwethu evakashele ukukhiqizwa isitshalo yesimanje. Lapha sabona mathupha ukulethwa nokulawula izinga yebhali nezingcezwana Mash, Ubhiya futhi zokuhlunga inqubo. Saya omkhulu, ngaphandle selehlile yangaphandle ikholomu okumile, single okusanhlamvu nogologo umoya ukuxubanisa endleleni yethu, gqamisa kosuku, omkhulu Embizeni Namanje ihholo Ukuvakashela distill. le, ukuze sitshele mayelana omkhulu imishini zethusi isimangaliso, kwakunguJesu, kodwa Midleton uqobo kakhulu master Distiller Brian Nation, ezenzeka kusukela ngo master of umhlalaphansi, Barry Crockett e 2013 leli qembu target wedwa ngabe ngenze uhambo ngathi, ngoba lena ndoda, ogama lakhe inyatheliswe ebhodleleni ngalinye Midleton nogologo Ezingavamile kakhulu phakathi nokubusa kwayo esikhundleni Barry. Kwakuthakazelisa ukubukela, njengoba savakashela imbiza enkulu namanje Hall, ukuthi indawo ithimba ezintathu embizeni yethusi yesibili, ethimbeni esikhathini esizayo esiseduze ngokuzethemba ujoyine. Lokhu kuzokwenza kabili imbiza namanje ukukhiqizwa nogologo at Midleton.
Ngalobo busuku, esidlweni ngesikhathi eseduze Ballymaloe House Midleton inkosi nokuvuthwa Kevin O'Gorman, othisha uDavide futhi Midleton yethu abaphezulu lokumaketha team, Enginakho futhi ngomqondo ophelele, ukuthi lokhu Pernod Ricard ephethwe Midleton nenhlangano enkulu namanje enhliziyweni, operation Irish kakhulu futhi okubaluleke, Ngiphuma kulowo muzwa ebusuku, Kwadingeka isidlo santambama encane Business Irish Umkhaya kunokuba igatsha lemboni esikhulu sezizwe ngezizwe. Othile eliphezulu kakhulu phezulu Pernod Ricard unqume ngokuhlakanipha, ukuthi, uma kuziwa ekwenteni kahle kakhulu kulokunye Irish nogologo amaqembu, uma kungenziwanga waphula, ke musa ukukulungisa!
Ngakusasa ekuseni thina bekuya egqamile futhi ekuseni, ihora Midleton thela Buckley, umuntu 5. Generation Master Cooper ukuchitha. Njengoba thina isiyakwazi David, Midleton amazwe wonke imiphongolo yabo kusukela Kentucky naseSpain. Ngamunye emgqonyeni kodwa esivivinyiwe nge ukufika Kudivayisi noma omunye nethimba lakhe elincane Cooper Ubani ongafaka ukulungisa imiphongolo utshwala nokho engahlose bubi ngamathuluzi namasu, owadlula kodwa izinkulungwane zeminyaka, ishintshe kusukela ubaba endodaneni. Anginayo indawo kule ubulungiswa ibhulogi ucezu amahora emangalisayo, sachitha eJalimane, isigaba, kodwa iphuzu, wafika ngempela endlini yami, kuyinto, ukuthi okuyinhloko-Cooper akuyona kuphela Cooper kakhulu, yena kumelwe futhi abe umfundisi omuhle noma 'Professor' nge ikhono, zadlulisela ubuciko esezingeni cooper ezintsha kuphela, kodwa isizukulwane esisha Cooper. ukuhlukanisa thela yemvelo ukuba kufundiswe yilona umphelelisi owayephelele amakhono ayo wobuciko kanye lobuchwepheshe, futhi lokhu ubelokhu eqashelwa e Midleton uchungechunge-YouTube kwevidiyo ne master in action.
balandela umhlangano zokuhlolwa lounge nge Midleton siqu Archivist professional uCarol Quinn futhi futhi umyalezo, Ngikhuluma kwasithatha, kwaba ubudlelwano phakathi nakumasiko, Economic nomndeni, ke kwaba futhi manje okushiwo Midleton Distillery. Sasinikezwa ukufinyelela eliyingqayizivele umthombo oyinhloko imibhalo kuhlanganise Eqinisweni wokugubha kwemvume distillery abadumile nokuhamba Midleton nabathengisi futhi bonke "uhlamvu" round Paddy O'Flaherty, Mark ngaphambi igama layo ngoba Paddy Whisky 101 iminyaka inikezwe.
Irish Whiskey Academy Distillery Vakashela
Ukulandela isigaba umhlangano oluthe xaxa ngokwenziwa ziphuzo zazihluzwa ikholomu esetshenziswa, ukwenza ukusetshenziswa olulodwa okusanhlamvu nogologo e Midleton le whiskeys ezihlangene, Thina angeziwe yokunambitha of Jameson Premium abamenyiwe.
Jameson esezingeni okuyinto 5 Million amacala akhiqizwa unyaka ngamunye ukusatshalaliswa emhlabeni wonke. A ingxube imbiza namanje futhi olulodwa okusanhlamvu nogologo abaneminyaka e Bourbon futhi sherry emiphongolweni.
Jameson Khetha Reserve Black Wemigqomo Iqoqwana Small wavuthwa imiphongolo ezikhethiwe, abangu ushiswe babe ezengeziwe thela Buckley ithimba ngemva kokufika e Midleton. Uphiko kuyizinhlayiyana kuyinto engavamile, kulandele ukuthi ziphuzo zazihluzwa imbiza yayo yokuqala noma evamile ezimbili ikholomu ziphuzo zazihluzwa namanje elihlobene ne kathathu distilled olulodwa okusanhlamvu whiskey.
Jameson Igolide siyinhlanganisela okusanhlamvu ezintathu ngabanye kanye imbiza namanje whiskey 14 ukuze 25 ubudala, iye abaneminyaka ebhodweni namanje okubabayo kanye nekhala peppery ezithambile Oloroso fruitiness zazo-oki vanilla e Virgin credit ubumnandi.
Jameson 18 Unyaka Old Limited izinqolobane inhlanganisela ENkosini Distillers wakhethwa sherry kanye Bourbon emiphongolweni abaneminyaka okungabanga bikho kuso esingaphansi 18 kweminyaka engu- ubudala. Ingxube sokugcina ke isikhathi esiqhubekayo ukugcwaliswa lokuqala Bourbon imiphongolo, ngaphambi ezineminyaka ligcwaliswe edition elilinganiselwe uchungechunge olunezinombolo amabhodlela. Umkhiqizo osuphelile Liyindawo bushelelezi futhi eziyinkimbinkimbi nge sekugcineni amahle eside futhi ikhumbuleka isikhathi eside.
Ngaphambi kwasemini saba ihora ku nokuvuthwa kanye ukuguga kagavini imiphongolo. ngemva kokuba, ezifana imiphongolo zivela Kentucky naseSpain, sabona wokuhlola, Ukulungisa kanye ukugcwaliswa inqubo, ngaphambi Midleton inkosi nokuvuthwa Kevin O'Gorman bavakashile ekhetheke kakhulu Hall 42, lapho Ngavunyelwa ukuvula emgqonyeni uphawu ka 15 Iminyaka ukwambula nogologo ubudala, intuthuko yakhe kusukela 3 Iminyaka isheke ugcwalise kusukela ukugcwaliswa ngokusebenzisa valinch noma enkulu zethusi nogologo pipette engifunda nabo izibuko ukuze isitoreji esiyingqayizivele amandla cask test. kamuva, ngesikhathi sekhefu, sisayinwe thela Buckley le Bung engawususa kusukela emgqonyeni njengoba unenkumbulo ekhethekile kakhulu ukuvakasha.
Irish Whiskey Academy Warehouse ka-Vakashela
Ngemva kwasemini kwase kuyisikhathi, konke, esasikufundile, Ukubeka e ezinsukwini ezimbili zokugcina zomhlangano ukuzijayeza kanye nesigaba kanye nesayensi laboratory umkhuba ubuciko nogologo lenhlanganisela. Sasisanda kuqala ukuvuthwa ukufinyelela ezihlukahlukene bobudala obungefani Embizeni Namanje futhi olulodwa okusanhlamvu whiskeys ezihlukahlukene imiphongolo ezahlukene. Futhi umphumela? Okwakufike eziyivelakancane nogologo Irish eyake yaba khona. A batch encane (70 ml) Ingxube Midleton zakamuva osafunda Whisky Blender uStuart McNamara!
Irish Whiskey Blend uStuart sika
4 Midleton Embizeni Namanje Whiskeys futhi Irish Whiskey Blend uStuart sika
Kwakuphakathi nesikhathi, eqeda umncintiswano, uthi revoir au, ukuze abangane bethu abasha e Midleton. Kodwa ngaphambi kokuba sihambe Midleton njengoba kuphothula Irish nogologo Academy, Sasizigqokele ngamunye nge ekhiqizwa anguye Irish Whiskey Academy Hand kwadingeka ngamunye inombolo ngabanye serial wakhishwa ngezifiso negama lethu.
Kwangimangaza, kangakanani mina ngalesi okukhulu, kodwa wafunda ukuvakashelwa mnandi kakhulu. Asikho isikhala esanele kanye nesikhathi kule blog okufutshane, ukuya imininingwane zikanokusho emakilasini, kodwa mina izolandela emasontweni ezayo nge-athikili amaningi enemininingwane ngabanye.
Angingabazi, ukuthi ulwazi, Izinkumbulo nokuhlangenwe nakho futhi ubungane nabanye abafundi kanye Midleton "umndeni" bakhiwa ngihlale nazo zonke ezinye umsebenzi wami wokuba Whisky umbhali. Kwaba ukuqonda okuvelele konke, ukuthi yini ezilungele kangcono mayelana Irish nogologo emhlabeni.
Njengoba umuntu abanezizinda professional imfundo imfundo e nogologo empilweni yami yini, Mina wangihlaba umxhwele umoya wabo izindawo kakhulu nemigomo yoqeqesho ku Academy. Kodwa ngaphezu kwakho konke Yangihlaba umxhwele izisebenzi Irish Whiskey Academy. Kuyinto abantu njengoDavide, inikeza, Kelly, Carol futhi Kevin, lo ngempela amandla lokhu Distillery kanye brand ayo. nabantu, ngubani Talent, Ukuzibophezela kanye nogqozi, is the future of the Irish nogologo umkhakha ezandleni kuhle kakhulu izizukulwane eziningi.
Uma ufuna, izimangaliso Irish nogologo Academy ukuzama wena ukuvakashelwa www.IrishWhiskeyAcademy.com . Une eziningi 4 izifundo, we 2 Amahora Irish Whiskey Experience Academy for € 59, i ntambama ngesikhathi Irish Whiskey Academy for € 175, usuku lonke Irish Whiskey Academy Owathola Iphakheji € 325 futhi usuku ezimbili-Irish Whiskey Academy isipiliyoni 1199 €, phakathi kwabo 5 * Ihhotela yokuhlala kanye isingathwe idina ebusuku wendawo yokudlela premium.
Stuart McNamara kuyinto Irish umbhali likagologo umqondisi IrishWhiskey.com futhi IrishWhiskey.fr.